We.com.mm - အင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိထားရမဲ့အချက် (၅ ချက်
တစ်ရက်ကြိုခေါ်တဲ့ Interview တစ်ခု ကိုကိုယ့်ဘက်ကပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရှိရဲ့သားနဲ့ မပြင်ဆင်ခဲ့ရင် … သိသင့်တာတွေမသိခဲ့ရင်၊ အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုလက်လွှတ်လိုက်ရတာနဲ့တူတူပဲမဟုတ်လား …. အဲဒီတော့ …။
အလှတွေပြင်တတ်မှ၊ ဝတ်တတ်စားတတ်မှ၊ လှပနေမှ ဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ကိုင်ထားပြီး Interview ကိုမသွားပါနဲ့ ….။ စာဖတ်သူ လှပကောင်းလှပနေမယ်၊ တောက်ပြောင်နေမယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမပါလာဘူး၊ CV က Update မဖြစ်ဘူး၊ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Knowledge မရှိဘူး၊ သင်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Description တွေကိုနားမလည်ဘူး၊ Company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Information တွေမသိဘူ၊ မတီးမခေါက်မိဘူးဆိုရင် စာဖတ်သူအတွက် ဒီ Interview ဟာဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူး။
သွားလဲလူပင်ပန်းပြီး ပိုက်ဆံကုန်တာရှိမှာပေါ့။ သင်ဘာမှမသိရင် ဘာမှမရဖို့များနေပြီလေ။ သင့်အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်တောင် သင့်ရဲ့ Lack of Observation ( စူးစမ်းရှာဖွေချင်စိတ်နည်းပါးတာ ) ကြောင့်ပဲ အမှတ်တွေလျှော့ချခံရမယ်ဆိုတာသတိပြုပါ။ အဲဒီတော့မသွားခင်Company နဲ့ပတ်သက်သမျှသတင်းအချက်အလက်တွေစုဆောင်းပါ။ သင့်ရဲ့ CV ကိုတစ်လလောက်ကြိုပြီး Up to Date ဖြစ်နေပါစေ။ Company ရဲ့ အဓိကအရေးပါတဲ့သူတွေ ( ဥပမာ CEO, Founder, Board of Director ) တွေရဲ့အမည်တွေကိုမှတ်မိနေပါစေ။ Detailလောက်မဟုတ်ရင်တောင် သင့်အနေနဲ့ briefing လောက်သိတာကအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်။
ဒါကတော့ပြောစရာတောင်မလိုပဲနဲ့ တော်တော်များများသိပြီးသားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ် ….။ ချိန်းဆိုထားတဲ့နေရာကိုအချိန်မှီရောက်နေတာမျိုး ….၊ ၁၅ မိနစ်လောက်စောပြီးကြိုရောက်နေတာမျိုး …၊ သာမန်ကြည့်ရင်ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ဘက်လူကတော့ သင့်ရဲ့အချိန်တိကျတဲ့အချက်ကို သတိပြုမိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် …။
Interview မှာလည်းတူတူပါပဲ။ မနက် ၁၁ နာရီအရောက်ဆိုပါတော့ သင့်အနေနဲ့ ၁၀:၄၅ လောက်မှာကြိုရောက်သွားလို့ ဘာမှအပန်းကြီးသွားတာမရှိပါဘူး …။ Interview ခန်းထဲဝင်မယ့် အချိန်ကိုစောင့်ရင်းပြင်ဆင်စရာရှိတာလေးတွေကိုသာ ပြင်ဆင်နေလိုက်ပေါ့ ….။ အချိန်တိကျတာဟာ interview မှာတင်မဟုတ်ပါဘူး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွေမှာပါ တော်တော်လေးခရီးရောက်တဲ့ အချက်လေးတစ်ချက်ဖြစ်တယ် …။
အဝတ်အစားရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်တာကလည်း Interview မှာ တော်တော်လေးကို ခရီးပေါက်တဲ့အချက်တစ်ခုပါ …။
ကိုယ့်ကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ မြင်ရသူစိတ်ထဲမှာ Smart ကျတယ်၊ သန့်သန့်ခန့်ခန့် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အထင်လေးတစ်ချက်ရောက်သွားဖို့လိုပါတယ် … ။
အဲဒီလိုဝတ်ဆင်တဲ့နေရာမှာ Overdo .. Overdressing မဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရမ်းကြီးတောက်ပြောင်လွန်းတဲ့အဝတ်အစားနဲ့ အဆင်တန်ဆာတွေ၊ Fancy accessories တွေ၊ အရောင်ရင့်ရင့်နဲ့ အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်တာကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ …။ မဝတ်ရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ … ။
သန့်သန့်ပြန့်ပြန့် နဲ့ ရနံ့သင်းသင်းလေး
Interview သွားခါနီး မိမိရဲ့တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အလေးထားပြီးဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ ခြေသည်းလက်သည်းတွေရှည်နေတာမျိုး၊ ဆံပင်ကရှုပ်ပွနေတာမျိုး၊ ခံတွင်းနံ့ဆိုးနေတာမျိုး၊ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးနံ့နံတာမျိုးတွေဟာ သင့်ရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းကြောင်းဖော်ပြသလို သင့်ရဲ့ interviewer တွေကိုလည်း အသံတိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးရာကျပါတယ် ….။
ရေမွှေးအနံ့ပြင်းပြင်းကို ပုလင်းလိုက် မှောက်ကျလာတယ်ထင်ရအောင်မတရားဆွတ်ထားတာမျိုး၊ Aftershave တွေအများကြီးလိမ်းထားတာမျိုး …၊ Body Lotion တွေ အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် လိမ်းသွားတာမျိုးတွေကိုရှောင်ပါ။ ရနံ့က ရုတ်တရက်ဆိုမွှေးတယ်ထင်ရပေမဲ့ Aircon လွှတ်ထားတဲ့ လေလုံ Interview အခန်းမျိုးဆိုရင် အခန့်မသင့်ရင် အဲဒီအနံ့တွေကြောင့်မူးလဲတာတွေ ၊ သတိလစ်တာတွေ၊ အောက်ဆီဂျင်မဝတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရလဒ် မကောင်းခဲ့ရင်ရော …
Interviewee (အင်တာဗျူးဖြေသူ) တော်တော်များများက Interview မအောင်ရင် ဘာလို့မအောင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သိကြတယ်။ ဆက်ဆံရေးအားနည်းတာလား၊ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိလို့လား … စသည်ဖြင့်ပေါ့ .. ။
ကျရှုံးခဲ့တယ်ဆိုရင် … အဲဒီအချက်ကိုပဲ သင့်ရဲ့နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချပါ။ သင့်အနေနဲ့ Interviewer ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မဲ့ ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် Email လိပ်စာရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီကနေတစ်ဆင့် သင်ဘာကြောင့်ကျရှုံးရတယ် ဆိုတဲ့ Feedback ကိုတောင်းခံပါ။ ဒါဆိုသင့်အနေနဲ့ အလုပ်ပေါ်မှာ ဘယ်အတိုင်းအတာထိ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိလဲဆိုတာကိုပြလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီကနေ သင်ခန်းစာယူပြီး ငါဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တယ် …။ ကံကောင်းရင်သင့်ရဲ့ Interviewer က Company မှာနောက်ထပ် လစ်လပ်နေရာရှိလာရင်တောင် သင့်ကိုဦးစားပေးအနေနဲ့သတိရကောင်းရနိုင်ပါတယ် …။
လူတော်တော်များများ Facebook ပေါ်မှာပြုလုပ်တတ်တဲ့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အရာများ
အိပ်ချိန်လွန်ကဲခြင်းက ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်လဲ?
ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ တင်လို့ရစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ…
သင်္ကြန်ရေစိုပြီး ဖျားသွားတဲ့ဖုန်းလေး နေပြန်ကောင်းလာဖို့ အကောင်းဆုံးပြုစုနည်းများ
15 days ago by Gabriel